इस्स हुन्छ, त्यसरी नयाँ नेपाल !!!! - Palpali Milan
Home Friends Artical Purna Bandhan साथीको पाना इस्स हुन्छ, त्यसरी नयाँ नेपाल !!!!
इस्स हुन्छ, त्यसरी नयाँ नेपाल !!!!
Friends Artical, Purna Bandhan, साथीको पाना,
मेरा त कानै टट्टाई सक्यो, यो नयाँ नेपाल-नयाँ नेपाल सुन्दा-सुन्दा । कुनचाहीं उल्लुको दिमागमा आएछ यो कुधारणा । नेपाल त नेपालै होइन र के को नयाँ र पुरानो नि ? सिमा मिचेको कुरामा चुइक्क नबोल्ने तर सत्ताको खेलका लागि नयाँ दिल्ली सम्म स्वास्थ्य जाँचको वहानामा जाने र भारुहरुका खुट्टा ढोग्ने पनि तिमीहरु मध्येका ढोंगीहरुलाई कस्ले चिनेको छैन र ?
तिम्रा भारुप्रभूले मिचेको हजारौं विगाहा जग्गा फिर्ता ल्याउने हुत्ती छ? जंगबहादुर निरंकुसै भए पनि अनेक दाउपेच गरेर नयाँमुलुकका चारवटा जिल्ला फिर्ता लिए । सक्छौ भने, सिक्कीम, दार्जिलिङ्ग, देहरादुन, कुमाउ, गढवाल र कांगडा नेपालमा मिसाउन । अनि तिमीहरुले आलाप्नै पर्दैन, हामी आफै भन्छौ नयाँ नेपाल । कि त नयाँनयाँ विकासका संरचना तयार गर, झिलीमिली सिंगापुर जस्तो बनाऊ, बनाउने पनि भनेका हौ, खै त ? न त कुनै ठोस योजना छ, न त त्यसप्रकारको पूर्वाधार । बेकारमा भूस्याहा कुकुरले हावामा भूक्या छ, भूक्या छ नयाँ नेपालको भूकाई ।
पहिले पहिले सडक विस्तारका लागि केशव स्थापितले निजी घरहरु भत्काउँदा हामी उनलाई तोडफोड स्थापित भनेर व्यंगविनोद गथ्यौं । अब तोड्फोड भट्टराई भन्नु पर्ला । जे होस तोडफोड भट्टराईले भने साइड वाई साइड नयाँ काठ्माण्डौं बनाउलान कि जस्तो संकेत दिए । यो उनले दिए वा सार्कका महाप्रभूहरुले दिए । जे होस् नयाँ काठमाण्डौ भन्न सम्म मिल्ला जस्तो छाँट देखियो । कि त्यस्तो केही पूर्वयोजना होस् तिमीहरुको । वेकारको आलाप यो अति भयो ।
भएका १४ अंचल ७५ जिल्लाले के खाएको छ कसको ? कसैलाई आपत्ती नभएको सिमारेखा फेरबदलको बहानामा, नभएको जातिए विभेद र रोष फैलाएका छन् । बोतलको आकार बदल्ने कोसिस् गर, त्यसमा रहेको अमृत होइन । तिमी कामचोरहरु त पुरानै बोतलमा रहेको अमृत फालेर वीष भर्ने काम गर्दै छौ ।
इतिहासको धरोहर भत्काएर अनेक ताण्डव गर्ने तिमी चोरहरुको इतिहास हाम्रा सन्ततीले त लेख्ने हुन् नि, पख । तिमीहरुको कुइतिहास लेख्ने छन् हाम्रा सन्ततीहरुले । कतै तिमीहरुले कुनै आफ्नो सालिक वा कुनै ऐतिहासिक संरचना बनायौ भने त्यो भत्काउन हुन्न बरु ती कुतत्वहरुको पहिचानका लागि एउटा नमूना हुनेछ हाम्रा सन्ततीका लागि । रामायणका रावणको तस्विर नराखेका हुन र बाल्मिकी रामायणमा पौराणिक विव्दानहरुले ।
चाहिन्छ नि त्यस्ता पापीको पहिचानका लागि, तस्विर पनि । राणाहरुले १०४ वर्ष सम्म मच्चाउनु ताण्डब नमच्चाएका हुन् र ? तर त्रिभूवन, महेन्द्र, विरेन्द्र र अहिलेका ज्ञानेन्द्र लगायत विपी, पुस्पलाल, गणेशमान, कृष्णप्रशाद, मनमोहन, मदन भण्डारी र तिमीहरुका सहपाठी गिरिजाले समेत टुंडीखेलका चारैतीर रहेका राणाहरुका घोडामा चढेका सालिकहरु भत्काएका पनि छैनन्, हटाएका पनि छैनन्, न त तिनलाई प्रजातन्त्रको बाधक नै ठानेका हुन । रोटी पकाउने बेला तावामा हातपोल्यो भन्दैमा तावा नै मिल्काउने हो र ? फेरी हात नपोल्ने हिसाबले सर्तक पो हुने हो । तिमीहरुले त हदै सम्म गर्न थालेऊ । नाम बदल्दैमा व्यक्तिको चरित्र बदलिंदैन ।
त्यस्तै देशको स्वरुप भत्काएर, सामाजमा विवाद र हंगामा मच्चाएर, नयाँ नेपाल बन्छ भन्ने तिमीहरुको त्यो धारणा त्यसैले गुधारणा हो । कुपनि अलि सभ्य भएर आची शब्द प्रयोग गरें, मैले त । तिमीहरु त आची भन्दा पनि घीनलाग्दो काम गर्दैछौ त्यसैले । गर्नसर्न क्यै सक्दैनन्, जे उपद्रो गर्ने बेला पनि बस नयाँ नेपालका लागि भन्दियो, हिरो भइयो । भै गयो नयाँ नेपाल, इस्स हुन्छ, त्यसरी नयाँ नेपाल !!!!
Tags # Friends Artical # Purna Bandhan # साथीको पाना
Labels: Friends Artical, Purna Bandhan, साथीको पाना